Dzimwe Nhengo dzeMDC-T Dzokwikwidza Dzakazvimirira muHarare
Chikumi 15, 2018
Nhengo dzemapato ezvematongerwo enyika ose ari kukwikwidza musarudzo dzeparamende dzakaswera dzichisvitsa mapepa adzo ekuti dzikwikwidze musarudzo idzi kudare rinotambira mazita evanhu varikuda kukwkwidza musarudzo.
Rakaswera riri besanwa padare ramejasitiriti muHarare nezuro apo vari kuda kukwikwidza musarudzo dzeparamende mudunhu reHarare vakamirira mapato akasiyana-siyana vanga vachisvitsa mapepa avo kudare re nomination court.
Mumwe wevakasvitsa mapepa avo kudare iri ndiVaGodwin Gomwe vanove sachigaro wevechidiki muZanu PF mupurovhinzi yeHarare avo vari kuda kukwikwidza vakamirira bato ravo kuBudiriro.
VaGomwe vakati kunyange hazvo vakwanisa kusvitsa mapepa avo kudare iri, havasi kufara nekuti dare rinotambira mapepa aya ragariswa munzvimbo diki yanga isingakwane gurumwandira revanhu vanga vachisvitsa mapepa kudare.
Mumwe asvitsa mapepa ekukwikwidza musarudzo dzeparamende ndiAmai Tendai Ndoro avo vari kukwikwidza vakazvimirira kuHatfield. Amai Ndoro vakati sezvo vanga vasiri nhengo yeripi bato riri munyika, vati vaona zvakakodzera kuti vamire musarudzo vachiti sezvo vari chiremba vane ruzivo rwakawanda rwunogona kubatsira nyika.
Vakatiwo havana kufara nekunonoka kwanga kuchiita vashandi vedare re nomination court pakutambira kwavanga vachiita mapapa.
Mwana wevaimbova mutungamiri weMDCT, VaMorgan Tsvangirai, Amai Vimbai Java-Tsvangirai, vakakwanisa kuisa mapepa avo kudare re nomination kuti vakwikwidze vakamirira MDC Alliance kuGlen View South.
Mumwe aida kumirira MDC Alliance kuGlen View South uko kusina kuzoitwa sarudzo kuchinzi ndekwemadzimai, VaGladman Hakata, vakasvitsawo mapepa kudare iri uye vachange vakazvimirira musarudzo idzi.
Vacharlton Hwende vakasvitsawo mapepa avo kuti vamirire MDC Alliance kuKuwadzana East uko kusina kuzoitwa sarudzo dzema primary mushure memhirizhonga inonzi yakaitika ikoko. Vachakwikwidzana naAmai Betty Kaseke veZanu PF pamwe nenhengo mbiri dzeMDC dzinoti VaIshamel Kauzani naVaUrayayi Mangwiro avo vanove kanzura mukanzuru yeHarare.
Zvichakadai, MDC Alliance ichange ichimiriirirwa naVaShadreck Mashayamombe avo vaimbova sachigaro weZanu PF mupurovhinzi yeHarare, avo vakadzingwa muZanu PF.
VaMashayamombe vachange vachikwikwidzana naVaTongai Mnangagwa veZanu PF vanove hama yemutungamiri wenyika pamwe nevemamwe mapato akaita seNational Patriotic Front, People’s Rainbow Coalition, Zipp, nemamwe.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mupurvhinzi yeHarare mubato reNationa Patriotic Fron inotungamiriwa naVaAmbrose Mutinhirit, VaKudzai Saruwaka, vakaudza Studio7 kuti vachakwikwidza zvigaro zvese sebato mupurovhinzi yeHarare.
Nhengo yepurovhinzi muNational People’s Party uye vari mumubatanidzwa wePRC unotungamirwa naAmai Joice Mujuru, VaFriday Muleya, vakati vaisawo nhengo dzavo munzvimbo dzose dziri mudunhu reHarare.
Zvichakadai, sachigaro weMDCT inotungamirwa naVaNelson Chamisa mupurovhinzi yeHarare, VaEric Murai, vakati havasi kuzoshaya hope nenhengo dzebato ravo idzo dzasarudza kupinda musarudzo idzi dzakazvimirira.
MDCT inotungamirwa naMuzvare Thokozani Khupe yakati yakanga iri mubishi kuti iwone kuti yaisawo nhengo dzichaimirira munzvimbo dzose muHarare nekune dzimwe nzvimbo.
Nhengo yeMDCT yaVaChamisa, VaPeter Mudavanhu,ndevamwe vevachapinda musarudzo dzeparamende vakazvimirira sezvo vachiti havasi kufara kuti VaTendai Biti ndivo vakanzi vakwikwidze kuHarare East vakamirira MDC Alliance uko kwavachatatsurana nemutevedzeri waMuzvare Khupe, VaObert Gutu pamwe naVaTerence Mukupe veZanu PF.
VaSimon Chidhakwa vanove nhengo yeparamende parizvino vakamirira MDCT yaVaChamisa vachapinda kusarudzo idzi vakazvimirira mushure mekusvitsa kwavaita mapepa avo kudare.
VaChidhakwa vakati vakabirirwa musarudzo dzema primary pavakakundwa naVaJob Sikhala.
Umwewo achakwikwidza akazvimirira musarudzo dzeparamende ndivaZakeli Makari vanove nhengo yeZanu PF avo vakakundwa musarudzo dzema primary mubato iri,
Zvichakadai, sachigaro weZEC, Amai Priscilla Chigumba, vakati varikufadzwa nemafambisirwo arikuitwa basa nedare re nomination court kunyange hazvo vachiti pamboita kurwisana kunzvimbo dzakaita seChitungwiza uko kunonzi nhengo dzeMDCT yaVaChamisa dzabvutira vamwe vanhu mapepa avanga vachida kusvitsa kudare re nomination court vakamirira MDCT yaMuzvare Khupe.
Amai Chigumba vakati kutambirwa kwemapepa uku kuchasvika pakati pehusiku kuitira kuti vose vari kuda kukwikwidza musarudzo vakwanise kusvitsa mapepa avo.